2021 / 05 / 13 वर्गीकरणनल गाईड 2340 0
तपाईंको बाथरूम एक ओएसिस हो जहाँ तपाईं एकान्तमा आराम गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा उम्मेदवार हो जुन तपाईंको दैनिक जीवनलाई सुधार गर्दछ, र तपाईंको घरको पुन: बिक्रि मूल्य बढाउन सक्दछ। कोठामा प्रत्येक चीज तपाईले बनाउनु भएको अनुभूति र शैलीलाई असर गर्ने छ। त्यसकारण जब गुणवत्ता र सौन्दर्यशास्त्रको कुरा हुन्छ, डेल्टा बाथरूमको नल वितरण हुन्छ।
बाथरूमको नल छान्दा पानी खोल्ने क्षमता भन्दा पर जान्छ। यो घरको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कोठा मध्ये एकमा प्रकार्य र शैली थप्नको बारे हो।
बाथरूम faucets मा केहि शीर्ष विकल्पहरू अन्वेषण गर्न यो डेल्टा बाथरूम नल समीक्षा गाइड प्रयोग गर्नुहोस्।
शीर्ष डेल्टा बाथरूम नल: २०२१ को लागि हाम्रो छनौट
सम्भव भएसम्म सहज र सजिलो अनुभव बनाउँदा सही नलले तपाईंलाई उत्तम रूप दिन्छ। यदि तपाईं त्यस आदर्श नलको खोजीमा हुनुहुन्छ भने उत्तम डेल्टा स्नानगृह नलको लागि हाम्रा शीर्ष छनौटहरू जाँच गर्नुहोस्।
एक आधुनिक हेराई सफा, पातलो लाइनहरु को बारे मा छ, र तपाईको बाथरूममा सफाई भन्दा राम्रो वातावरण के छ? तपाईंसँग गाह्रो समय थियो धेरै आधुनिक नक्कलका साथ आधुनिक सिंगल होल बाथरूम नल 567 XNUMX एलएफ-पीपी भन्दा आधुनिक देखिने साथ।
लाहारा डेल्टाको सबैभन्दा लोकप्रिय बाथरूम faucets मध्ये एक हो, र यो कन्फिगरेसनको विभिन्न प्रकारमा आउँदछ। तपाईले चाहानु भएको शैली र तपाईको काउन्टरटप वा भ्यानिटीको कन्फिगरेसनमा निर्भर गर्दै, लहरा व्यापक 3-होल बाथरूम नल 3538-CZMPU-DST उत्तम फिट हुन सक्छ।
तपाईं लहरा शैलीसँग प्रेम गर्नुहुन्छ तर तपाईंले आफ्नो बाथरूम काउन्टरटप स्थापना गरिसक्नु भएको छ र यो कन्डन्डेड थ्री-होल कन्फिगरेसन भएको छ, फराकिलो छैन। तपाईं भाग्यबाट बाहिर हुनुहुन्न, किनकि डेल्टासँग लाहरा सेन्टरसेट बाथरूम नल २2538-CZMPU-DST छ।
Tr. ट्रिन्सिक सिंगल-होल बाथरूमको नल
ट्रिन्सिक एकल-होल नल समकालीन डिजाइनको उत्तम उदाहरण हो। यसको आधुनिक र परम्परागत डिजाइन तत्वहरूको मिश्रणको साथ, यसको सरल तर उच्च-गुणवत्ता निर्माणको उल्लेख नगर्न, यो नल कुनै पनि बाथरूमको लागि इष्टतम विकल्प हो।
एकल प्वाल स्थापना
हीरा इम्बेडेड सिरेमिक डिस्क नियन्त्रणहरू
संक्षारण प्रतिरोधी विधानसभा
पाँच फिनिशमा उपलब्ध
यो सबैलाई राम्ररी थाहा छ कि डेल्टाको नल टिका लागी बनेको छ, तर ट्रिन्सिकले उनीहरूको धेरै उन्नत, उच्च-गुणस्तरका आविष्कारहरूलाई एक टुक्रामा मिलाउँछ। इनोफ्लेक्स PEX आपूर्ति लाइनहरु मा शक्ति र लचिलोपन को लागी दरहरु र क्षतिहरु लाई हटाउन को लागी हो जबकि अनौठो सिरेमिक डिस्कहरु उद्योग औसत भन्दा दुई गुणा लामो समय सम्म रहन्छ।
अवश्य पनि, ट्रिन्सिकको सौंदर्यशास्त्र विभागमा अभाव छैन। चिकना डिजाइन शैम्पेन कास्य, म्याट कालो, क्रोम, स्टेनलेस, र भेनिस कांस्य कुनै पनि बाथरूमको दृश्य फिट गर्न आउँदछ।
Tr. ट्रिन्सिक व्यापक बाथरूम नल
ट्रिन्सिक लाइन नल डेल्टाको क्लासिक्स हो, त्यसैले यो आश्चर्यजनक छैन कि धेरै घरमालिकाहरूलाई सम्भव भएसम्म विकल्प दिनको लागि तिनीहरू दुवै एकल-प्वाल र तीन-होल स्थापना गर्दछन्। ट्रिन्सिक व्यापक बाथरूम नल यसको नामको विरासत सम्म जीवित छ।
इनोफ्लेक्स PEX आपूर्ति लाइनहरु
क्रोम, भेनिसियन कांस्य, शैम्पेन कास्य, म्याट कालो, र स्टेनलेस समाप्तमा उपलब्ध छन्
जबकि ट्रिन्सिक डिजाइनको एकल-प्वाल संस्करण सानो कम्प्याक्ट भ्यानिटीहरूको लागि उपयोगी छ, यसले ठूलो भ्यानिटीहरू र बाथरूम काउन्टरटप्समा असंगत देख्न सक्छ। ती अवस्थाहरूमा, व्यापक डिजाइन एकदम उपयुक्त छ।
यस नलमा सबै उच्च-गुणहरू सुविधाहरू छन् जुन तपाईले ट्रिन्सिक नलको साथ आशा गर्नुहुन्छ, जस्तै हीरा-इम्बेडेड सिरेमिक डिस्क र टिकाऊ इनोफ्लेक्स PEX आपूर्ति लाइनहरू। केवल भिन्नता भनेको तपाईको बाथरूमको बाहिरी रूपको लागि ध्यान दिएर पूरकको लागि यसको व्यापक कन्फिगरेसन हो।
Nic. निकोली व्यापक बाथरूम नल
एक व्यापक नल डिजाइन तपाइँको बाथरूमको भित्र एक विशेष भव्यता र प्रख्यातता प्रदान गर्दछ, जसले त्यस नलको सौन्दर्यतालाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाउँछ। यदि तपाईं समकालीन वा आधुनिक बाथरूमको लागि लक्ष्य गर्दै हुनुहुन्छ भने निकोलि वाइडरूम व्यापक बाथरूम नल सही फिट छ।
थ्री होल व्यापक स्थापना
नाली विधानसभा समावेश छ
यो नलको व्यापक डिजाइन तपाईको आफ्नैलाई अनुकूलित गर्न सजिलो छ। वास्तवमा, यो छ देखि १teen इन्च सम्म कुनै तीन-होल स्थापना फिट गर्दछ। नलले कुनै पनि मानक आपूर्ति लाइनहरूसँग पनि काम गर्दछ, तर दिमागमा राख्नुहोस् कि आपूर्ति लाइनहरू सामेल छैनन त्यसैले छुट्टै तपाईंको खरीद गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
Hay. हेवुड एकल-होल बाथरूम नल
एक नल र दुई ह्यान्डलको साथ परम्परागत बाथरूम नल सबैको कप चिया होइन। यदि तपाईं अधिक कम्प्याक्ट नल चाहनुहुन्छ भने, हेवुड एकल-होल बाथरूम नल तपाईंको सपना स्थिर हुन सक्छ।
हेवुड अन्तिमसम्म बनेको छ। यसको डेल्टा-विशिष्ट डायमंड सील टेक्नोलोजीले तपाईंलाई आउँदो बर्षसम्म चुहावटमुक्त बनाउँछ। यो एकल होल स्थापनाको लागि डिजाइन गरिएको छ, जबकि नल एक वैकल्पिक डेक प्लेटको साथ साथै तीन-होल कन्फिगरेसन समायोजन गर्न आउँदछ।
हेवुडको भव्य पारम्परिक डिजाइन न्यानो, आमन्त्रित बाथरूम भ्यानिटीको लागि उत्तम छ। यो क्रोम, स्टेनलेस, वा भेनिस कांस्य फिनिशमा उपलब्ध छ। तथापि, दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईलाई यस नलको लागि अधिक ठाडो क्लियरेन्स चाहिन्छ प्राय: तुलनात्मक रूपमा तुलनात्मक रूपमा शीर्ष अपरेशनल लीभरको तुलनामा।
हाम्रो सूचीमा अहिलेसम्म प्रायः faucets समकालीन वा आधुनिक दायरामा कतै रहेको छ। यदि तपाईं अधिक परम्परागत रूप चाहानुहुन्छ भने, हेडवुड सेन्टरसेट बाथरूम नल क्रोम २25999 XNUMX L एलएफ तपाईंको गल्ली ठीक हुनेछ।
9. Lahara एकल छेद बाथरूम नल
सानो ठाउँहरूमा वा पाउडर कक्षहरूको लागि बाथरूमहरूको लागि, एकल प्वाल स्थापना सामान्य छ। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि यसले लोकप्रिय लाहारालाई तपाइँको बाथरूमको लागि विचार गरीएको छ, फेरि सोच्नुहोस् र लहरा एकल छेद बाथरूम नल 538 XNUMX-सीजेडएमपीयू-डीएसटीमा हेर्नुहोस्।
10. पिभोटल एकल-होल नल
यदि तपाईं अत्याधुनिक नलको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, पिभोटल एकल-ह्यान्डल नल तपाईंको बाथरूमको लागि उत्तम विकल्प हो। यो कोणीय डिजाइनको एक अद्वितीय रूप छ जुन तपाईको बाथरूमलाई बाकस भन्दा टाढा राख्छ।
पाइवोटल हाम्रो सूचीमा महँगो मोडेलहरू मध्ये हुन सक्दछ, तर धेरै घरमालिकहरूका लागि जसले अब बाथरूम राख्छन् उनीहरू आँखा खोल्न सक्दैनन्, यो प्रत्येक पैसाको लायक हो। यो आधुनिक नलले यसको सुविधाजनक कम्प्याक्ट आकारमा प्रशस्त सुन्दरता पैक गर्दछ। अनुकूलन दृश्यको लागि, यो पाँच लोकप्रिय फिनिशमा पनि उपलब्ध छ।
हो, गुणस्तर पनि पिभोटलको प्रमुख अंश हो। डेल्टाको भरपर्दो डायमंड सील टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर, यो नल अन्तिमसम्म बनेको छ।
११. फाउन्डेशन एकल ह्यान्डल नल
सबैजना चाहँदैनन् कि उनीहरूको नल उनीहरूको बाथरूमको मुख्य भाग होस्। यदि तपाईं केवल आधारभूत, कार्यात्मक, उच्च-गुणवत्ताको नल चाहनुहुन्छ भने, तपाईं फाउंडेशन एकल-ह्यान्डल नलको लागि उत्तम उम्मेद्वार हुनुहुन्छ।
अधिक शैलीहरू र खरीद सल्लाहहरूका लागि हाम्रो अन्य डेल्टा नल 2021 खरीद गर्ने मार्गनिर्देशहरू जाँच गर्नुहोस्!
अघिल्लो :: डेल्टा स्नान نل
2021 / 05 / 09 1639
2021 / 05 / 08 1473
2021 / 01 / 28 2905